Diiwan galin – NUSOJ – National Union of Somali Journalists
www.nusoj.org.so Email:- nusoj@nusoj.org.so nusojmember@gmail.com Tel:- (+2521) 855747,
NUSOJ Headquarter: Makah-al-Mukaramah Road. Mogadishu, Somalia.
HABKA XUBIN KA NOQOSHADDA NUSOJ
NUSOJ waxay u aas-aasantahay difaaca xuquuqaha iyo horumarinta wariyaasha Soomaaliyeed ee ka howlgala qeybaha kala duwan ee warbaahinta iyo kuwa madaxa-banaan. Sida uu qeexayo dastuurka NUSOJ wariye kasta oo Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay inuu ku soo biiro karo Nusoj isaga/iyada oo soo codsanaya xubinnimada Nusoj, ka dibna soo buuxinaya sharuudaha ku qoran Form-ka ama liiska xubinnimada ee uu bixinayo gudiga fulinta.
XUBIN BUUXDA: Qof si buuxda ugu howlan howsha saxaafadda kana howlgala mid ka mid ah qeybaha kala duwan ee warbaahinta ama ah wariye madax-banaan, waxaana ku waajib ah bixinta qaaraanka Ururka marka ay golaha hogamintu ansixiyaan xubinimadiisa buuxda.
XUBIN AAN BUUXIN: Waxaa xubin aan buuxin (Associate member) loo aqoonsanayaa dhamaan suxufiyiinta awooda u leh inay shaqaaleeyaan ama ka eryaan shaqada wariye ama shaqaale kale oo warbaahin, waxayna ka qeybgalayaan qaraanka ururka.
XUBIN SHARAFEED: Qof taageera Ururka, Saxaafadda ama warbaahinta oo u qabta howlo muhiim ah. hadii ay golaha hogaamintu u arkaan shaqsi gacan ka geysan kara kobcinta ujeedooyinka Ururka wuxuu goluhu u aqoonsanayaa Xubin sharafeed, xubin sharafeed ma codeyso lagamana doonayo wax qaaraan ah.
Hadii aad qabto su’aalo la xidhiidha buuxinta codsigan ama u qalmidaada xubinnimo ee Nusoj, fadlan la soo xidhiidh xafiiska Nusoj, gaar ahaan waaxda qaabilsan howshan adiga oo soo wacaya Taleefan lambarka ah: Mobile: +252 619036903, (+2521) 855747, ama Email-ka nusoj@nusoj.org.SO ama nusojmember@gmail.com
Qof kasta oo laga helo shuruudaha soo socda ayaa u qalma xubinnimada ururka, qofkaasina waa in:
Da’diisu ka weyn tahay 18 sano.
Uu deggan yahay ama u dhashay dalka ururku ka shaqeeyo.
Leeyahay shaqsiyad wanaagsan iyo garasho suubban.
Aqbalaa in uu u hoggaansamayo xeerka iyo nidaamyada ururka, taageeraana ujeeddooyinka iyo ahdaafta ururka.
Aanu ka tirsanayn/ku lug lahayn koox siyaasadeed, diimeed, xisbi, IWM (….)
Aan loo xirin dambi damiir ama akhlaaq la xidhiidha.
Aanu ku lug lahayn hawl ka hor imanaysa ujeeddada iyo ahdaafta ururka.
Oggolaadaa bixinta qaaraamada xubinnimo (ama kuwo kale eela xeeriyo).
Helaa oggolaansha Golaha Sare ee xubinnimada ururka.
uu ka soo shaqeeyay saxaafadda ugu yaraan sannad ama yahay weriye shahaado saxaafadeed ka helay machad ama Iskuul saxaafadeed oo la aqoonsan yahay.
NUSOJ waxay u baahan tahay in ay soo aruuriso isla markaana ay xafiddo warbixintaada si ay u hubsato wax yaabaha aad sheegatay jiritaankooda, sidaas darteed waxaan kaa codsaneynaa in aad si wanaagsan ugala shaqeyso guddiga fulinta.
Dhamaan warbixinada shaqsiga ah ee soo gala NUSOJ ee ku saabsan xubin waxaa ay ahaan doonaan kuwa ku kooban NUSOJ iyo xubinta. Si uu qofka ugu soo biiro NUSOJ waa in uu aqbalaa in warbixintiisa shaqsiga ah la tixraaco ama lagala yeesho weydiimo badan si uu gudiga fulintu u helo xog-sugan iyo cadeymo ku filan..
NUSOJ waxay u keydinaysaa warbixintaada shaqsiga ah si ay u fududeyso wada xiriirka xubnaha, si laguugu soo marsiiyo wixii dan ah ee ku anfacaya, hab adeeg hufan iyo hogaan maamulkiisu baahsanyahay ayay NUSOj u diyaarisay illaalinta xuquuqahaaga iyo horrumarinta danahaaga saxaafadeed.
Qof kasta ee loo aqoonsaday xubinnimada NUSOJ, waxa uu yeelanayaa xuquuq la mid ah ta ay leeyihiin xubnaha kale ee u diiwaangashan NUSOJ, waxaadna markaa xaq ugu leedahay NUSOJ inay difaacdo xorriyadaada iyo xuquuqahaaga Saxaafadeed, shaqaale iyo bini’aadanimo, kuu saamaxdo fursadaha horrumarineed, la xisaabtanto, ku matasho, ku siiso taageero walba oo waxtar u leh jiritaankaaga iyo xorriyadaada.
Hadii aad ku qanacday xubinnimadan fadlan buuxi Foomkan hoos ku qoran, waxaa xubinnimadaada ansaxinaya Golaha hogaaminta/sare ka dibna waxaa dib kuugu soo celinaya Guddiga Fulinta ee NUSOJ ee leh mas’uuliyadda fulineed ee Ururka.
Halkan guji si ad u dagsato FORM-ka CODSIGA XUBINIMADA NUSOJ